ရုရှား FOTOSKAYP အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
PicPick ယခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှသွား၏ရာခြုံငုံသုံးသပ်သတိမရကြသလော ထိုအခါငါမြို့သားထည့်သွင်းသည့်ကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမှာပီတိအံ့သြသွားတယ်။ ယခုမူကားငါ့ရှေ့မှာတစ်ခုပင်ပိုကြီးနဂါး၌တည်၏။ တွေ့ဆုံ - PhotoScape ။
သူတို့အလားတူလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပင်သော်လည်း, သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏သင်တန်းတိုက်ရိုက်နှစ်ခုအစီအစဉ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့, အဓိပ္ပာယ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးကျယ်ပြန့်အပိုင်း PhotoScape ။ ချက်ချင်း embedded ကာကွယ်နေဖြင့်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက် frame ကို add (နှင့်ရွေးချယ်မှုအသေးစားမဟုတ်ပါဘူး) နိုငျသညျ, image ကိုစောင်းသို့မဟုတ်လှန်, (အဖြူ, / အနက်ရောင် Sepia, အနုတ်လက္ခဏာ) အမြန် filter များ add, ထောင့်ဝိုင်းများနှင့်လည်းလှည့်။ သင်ကထင်ပါသလား? Ahn မရှိ။ ဒီနေရာတွင်အရောင်, အရောင်, ပြတ်သား, ရွှဲညှိနိုင်ပါတယ်။ နှင့်မည်မျှ filter များရှိ! တစ်ဦးတည်း 10 အမျိုးအစားများ vignettes ။ ငါအမျိုးမျိုးသောမှတ်သားသိနိုင်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး: စက္ကူ, ဖန်, mosaic, cellophane များအတွက် (!) ။ ကျနော်တို့ကသာတိကျတဲ့ဧရိယာမှသက်ရောက်မှုလျှောက်ထားရန်အသုံးပွုနိုငျသောက "Effect Bruch" ကိုသတိပြုပါချင်ပါတယ်။
သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားပရိုဂရမ်တွင် template ကိုအခြေစိုက်စခန်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ကြောင်းသိသည်။ ဒါကြောင့် image ကိုထည့်သွင်းဖို့တ္ထု၏ရှေးခယျြမှုကြီးမားသည်။ အိုင်ကွန်, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏ "မိုဃ်းတိမ်ကို" စာလုံးများ - ဂရုတစိုက်သျောနေကြသည်အားလုံးသော developer များနဲ့ subfolders ခွဲထားခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျက၎င်း၏ opacity ကို, အရွယ်အစားနှင့်အနေအထားကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ စသည်တို့ကိုစတုရန်း, စက်ဝိုင်းကဲ့သို့ပုံစံမျိုးစုံအကြောင်း, ငါမပင်အကြောင်းပြောနေတာတန်ဖိုးရှိထင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ပုဒ်မ image ကိုယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုးဖို့မြှုပ်နှံနေသည်။ ထိုအပင်ထိုကဲ့သို့သောထင်ရသောရိုးရှင်းတဲ့အမှု၌ PhotoScape အံ့သြဖို့တစ်ခုခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေအချိုးအစားပုံနှိပ်များအတွက်စံအပြင်, ... ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်တင်းပလိတ်များဖြစ်ပါတယ်။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ငါသည်အပုံတစ်ကွာခြားချက်ရှိပါတယ်, အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်အကြားခြားနားချက်များကိုသိသေးငယ်တဲ့, ဒါပေမယ့်မရကြပါဘူး။
အရာအားလုံးရိုးရှင်း - လိုချင်သောဓါတ်ပုံကို select လုပ်ပါ, သင်လိုအပ်သော settings တွေကို configure ။ အဆိုပါပစ္စည်းများ (စသည်တို့ကိုရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်ဘက်, ပြတ်သား,) ၏အသီးအသီးအဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်များဇာတ်စင်ခွဲဝေနေကြသည်။ ဒါ့အပြင်ထည့်သွင်းဘောင်များနှင့်အရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမရရှိနိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ "အရာဝတ္ထု" ၏အကူအညီနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ, ဥပမာ, သင့်ဓါတ်ပုံကိုရေစာထည့်ပါ။ ၏သင်တန်း, သင်သည်င့်လင်းမြင်သာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး collage Creating
သင်မှန်, သူတို့ကိုသဘောကျတယ်? ဒီတော့လျှင်သင်အဆုံး၌အရချင်တဲ့အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျစံတင်းပလိတ်များအနေဖြင့်ရှေးခယျြ, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Next ကိုပြီးသားအကျွမ်းတဝင်ပျဉ်ပြား, လယ်ကွင်းများနှင့်ထောင့် Round ဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းပြီ, မွှေးမော်ဒယ်များမှာ - သူတို့ကိုငါ 108 ရေတွက်!
ဒါဟာအစအခြို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက် developer များသီးခြားစီဖော်ထုတ်သော "ပေါင်းစပ်ခြင်း" မှမူသည်ဟုဝန်ခံကျိုးနပ်သည်။ ဒါကြောင့်ပြုမိရဲ့အဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာ - အဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့နီးပါးတူညီ collage get ကြောင့်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ကွဲပြားခြားနားသောသောတစ်ခုတည်းသောအရာ - တစ်အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်လိုင်းအတွက်ဖြစ်စေတစ်ဦး quadrilateral ၏ပုံစံအတွက်ပုံ interposition ။
Creating GIF ကို-ok
သငျသညျလျင်မြန်စွာ Flip ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြည့်ရှုကြောင်း, တူညီတဲ့စီးရီးထဲကနေတချို့ဓာတ်ပုံများရှိပါသလား? PhotoScape ကိုသုံးပါ။ လိုချင်သောဓါတ်ပုံကို Select လုပ်ပါ, အချိန်ကိုဘောင်နှုန်းကိုခန့် ထား. , အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချိန်ညှိခြင်း, images နဲ့လူအပေါင်းတို့၏အရွယ်အစားနှင့် alignment ကို set - "SIFCO" အဆင်သင့်။ ထိုသို့ဖွင့်ကလစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲသည်သာစောင့်ရှောက်ရန်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်ယခင်ကဖန်တီး Collage print ထုတ်နိုင်ပေမယ့်ကအားလုံးကိုအထူး function ကိုအခွင့်ကောင်းယူကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ပထမဦးစွာဓာတ်ပုံရဲ့အရွယ်အစားပုံနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူရဲ့သတ်မှတ်ကြကုန်အံ့, ထိုကောင်းသော, တစ်ဦးအမှားလုပ်ခွင့်ပြုမတင်းပလိတ်များရှိပါသည်။ ထို့နောက် Display ကိုအမျိုးအစား (လမ်းပိုင်းစာရွက်, ပြည့်စုံပုံသို့မဟုတ် DPI သည်) ကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုတပ်မက်လိုချင်သောအရုပ်ပုံထည့်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းစာတန်းများနှင့်, frames များကိုထည့်သွင်း, ခြုံငုံအကွာအဝေးကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံပွီးနောကျ, သငျသညျခကျြခငျြးပရင်တာမှရလဒ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ထင်ရသောအသုံးမကျပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်မရှေ့မှာဖြတ်ပြီးလာဘဲနောင်တ function ။ ထိုအခါငါက, သေးငယ်သူတွေကိုသို့ကြီးမားသော image ကိုဖွင့်ကိုချိုးဖျက်သူတို့ကို print ထုတ်, အဲဒီနောက်မြို့ရိုးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ပိုစတာဖန်တီးရန်ဖြစ်ခဲ့သည်လိုအပ်ပါတယ်။ သို့တိုင်သင်ကအသုံးမကျဖြစ်ပါတယ်ထင်ကြသလော ချိန်ညှိမှုများ, သင်တန်း, အနည်းဆုံး - pixels ကိုတစ်ဦး fixed width နဲ့ height ဖြစ်စေ, အတန်းနှင့်ကော်လံ၏နံပါတ်ရွေးဖို့။ အဆိုပါရလဒ် subfolder ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
PhotoScape ရှင်းလင်းစွာ PicPick နောက်ကွယ်မှကျန်ရစ်ဘယ်မှာဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအရာချက်ချင်းမျက်စိချွတ်ယွင်းဖမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပထမဦးစွာပုံ program ကို run နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအ item ကို select လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ယူပါ။ ဒုတိယအချက်မှာကအများဆုံး, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်ကိစ္စများတွင်အလုံအလောက်ပါလိမ့်မည်အကြောင်း, တစ်ခုလုံးကို Screen, တက်ကြွပြတင်းပေါက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရှေးခယျြထားဧရိယာဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ တတိယအချက်အဘယ်သူမျှမ shortcuts တွေကိုရှိပါသည်။
"ကမ္ဘာ့" လည်းဤနေရာတွင် dropper ။ ဒါကကိုယ့်ကအလုပ်လုပ်တယ်ရဲ့ကံမကောင်းပါကအပြစ်အနာအဆာမရှိပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအလိုရှိသောနေရာကိုရွေးရန်ရှိသည်, သာထို့နောက်တပ်မက်လိုချင်သောအရောင်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ အရောင်ကုဒ်ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်သကဲ့သို့နောက်ဆုံး3အရောင်များ၏သမိုင်း။
batch rename ဖိုင်တွေ
"အားလပ်ရက်ဂရိနိုင်ငံ 056" ကဲ့သို့တစ်ခုခုမြင်ရပါလိမ့်မည်အများကြီးပိုကောင်းသလိုနဲ့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအစားစံ "IMG_3423" ၏, သဘောတူသည်။ PhotoScape ကအလွန်လျင်မြန်စွာလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့ဆက်နှင့်နောက်ဆက်ကိုက်ညီအလိုအလျောက်ဒေတာ plug-in ကိုအမျိုးအစားကိုရွေးပါ (ဒါဟာစသည်တို့ကိုအရေအတွက်, ရက်စွဲ, နိုင်ပါတယ် လိုအပ်ခဲ့လျှင်စသည်တို့ကို) ။ အစ, သီးခြားဝင်နှင့်ရက်စွဲထည့်ပါ။ ထို့နောက်ရုံ "ပြောင်းလဲ" ကိုနှိပ်ပါ, လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ဖိုင်များကိုအမည်ပြောင်းထားပါသည်နိုင်ပါတယ်။
အငြင်းပွားဖွယ်ထက်အခြားဒီ function ကို Call - ကခက်ခဲသည်။ ဟုတ်တယ်, ရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းမှတ်စုစာအုပ်မော်ဒယ်များ, မှတ်စုစာအုပ်, ပြက္ခဒိန်များနှင့်ပင်ဂီတဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အားလုံးမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့သလဲ? တစ်ခုတည်းသောသိသာအားသာချက် - ချက်ချင်း print ထုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်း။
တကယ်တော့, ပြောအထူးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သင်က built-in စားရှာဖွေသူတဆင့်ဓာတ်ပုံကိုရှာဖွေ, ထိုသို့ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ ဓါတ်ပုံများတစ်ခုလုံးကို screen ပေါ်မှာချက်ချင်းဖွင့်လှစ်, နှင့်ထိန်းချုပ်မှု (Flip နှင့်ပိတ်ပွဲ) ကိုအနားမှာတည်ရှိသည်။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးပေမယ်သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုသည့်အခါအချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းပေါ်ပေါက်ကြပါဘူး။
•အကြီးစား template ကိုအခြေစိုက်စခန်း
ဒီတော့ PhotoScape - ကောင်းတစ်ဦး Processor, သငျသညျအလိုတော်ရှိလျှင်အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုသင်ပျော်မွေ့, ရှားပါးသည်။ ဒါဟာအချိန်တန်ထွက်ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်, အစား, "ကိုယ့်အမှုအတွက်" ဟုအဆိုပါအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
PhotoScape အခမဲ့ Download
Paint.NET window.dll မရှိဘဲအမှား fix လုပ်နည်း ဓာတ်ပုံ! အယ်ဒီတာ "iTunes ကိုချိတ်ဆက်ရန်, ဒါ push-အကြောင်းကြားစာကိုသုံးပါ" ဟုအဆိုပါအမှားကုစား
PhotoScape - သုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့ရုပ်တုဆင်းတုနှင့်ထောက်ခံမှုကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာ။ built-in converter နှင့် screenshots ဖန်တီးနေတဲ့ tool တစ်ခုရှိပါသည်။
ရေးသားသူ: MOOII TECH
Size: 20 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: PhotoScape Basic Editing Tutorial 2018-2019 (အောက်တိုဘာလ 2019).